InsideView Fuels Successga nke Ọma ahịa na Ebumnuche Ebumnuche | Martech Zone
Nrụgide na CMO na-arị elu ngwa ngwa ka enyere ha aka karịa ọrụ maka uto ego, tinyere mmefu ego na usoro ihe omumu iji mee ya. Greatkae sɛ: “Wiase! N'ikpeazụ ụfọdụ nkwanye ùgwù maka ndị ahịa. Ma ihe ịma aka a bụ ugbu a ka a na-aza ha ajụjụ maka ibute nsonaazụ nwere ike - na ngwa ngwa.
Nnukwu ihe mgbochi maka ihe ịga nke ọma bụ ndị ahịa azụmaahịa enweghị ikike dị mkpa iji tụọ mmetụta ha na ụba nnabata nke nzukọ ahụ (dịka ozi iji chụọ atụmatụ, igbu, na njikwa nke usoro ịga ahịa ha). Ihe omuma a na - eme ka ndi ndu ahia ghara inwe ike iza ajuju ndi di nkpa, di ka: Kedu mpaghara ndi anyi kwesiri ileba anya? Kedu ahịa ndị dị anyị nso ka anyị kwesịrị ịgbasa? Kedu ka anyị si arụ ọrụ nke ọma n'ị nweta ndị ahịa dabara na profaịlụ ndị ahịa anyị dị mma?
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ sara mbara enweghị ụzọ ngwangwa na ntụkwasị obi iji hụ ka ụlọ ọrụ ahụ na-eme megide atụmatụ ya ịga ahịa ka ha wee nwee ike ime mgbanwe. Ihe nsonaazụ bụ ohere efu efu nke ga - eme ngwa ngwa ngwa ngwa.
InsideView ezubere iche na ọgụgụ isi Ngwọta
InsideView na-enyere ụlọ ọrụ aka ịkọwapụta atụmatụ ha ịga-ahịa site na olu dabere na usoro agbadoro anya. Ya Ezubere iche ikpo okwu ọgụgụ isi na-enyere ndị ahịa na ahịa aka ngwa ngwa ịchọpụta ma tozuo ebumnuche kachasị mma, soro ndị ọzọ mkpa, mechie azụmahịa ndị ọzọ, ma jigide ma gbasaa akaụntụ.
Icheta ọgụgụ isi bụ ntọala
O zughi oke maka ụlọ ọrụ B2B ịdabere na ndepụta ndị edepụtara akọwapụtara site na firmographics. Ebumnuche ezubere iche na-aza ajụjụ nke onye, ​​gịnị kpatara, mgbe, na otu esi elekwasị anya site na ịnye akaụntụ ụlọ ọrụ na data kọntaktị, akụkọ oge na nghọta mmadụ, yana eserese njikọta zuru oke nke na-egosi otu gị na ndị ọrụ ibe gị si jikọọ na gị atụmanya na ndị ahịa. InsideView's Targeting Intelligence Platform na-eji mmụta igwe na ọgụgụ isi iji jikwa ọtụtụ nde akara nke onye ọ bụla na isi ihe data wee gosipụta ozi ọ bụla iji hụ na ọ zuru oke.
InsideView ike ire na igbu ahia
InsideView's SaaS dabere na ngwa azụmaahịa na-etinye ike nke Targeting Intelligence ozugbo na ahịa na azụmaahịa na-arụ ọrụ ma jikọta na Marketing Automation na CRM usoro.
Ebumnuche InsideView - Wulite ndepụta nke ahaziri iche nke ọma iji tinye ndị ahịa ziri ezi ozi ziri ezi.
InyeOnye Enrich - Mgbakwunye na-eduga na data ndị ọzọ iji nweta echiche ka mma banyere atụmanya gị.
InsideView Ahịa - Chọta, ghọta, ma jikọọ na akụkọ ziri ezi na ndị na-eme mkpebi iji mechie azụmahịa ndị ọzọ ngwa ngwa.
N'ime Ume ume ọhụrụ - Na-ehicha ma na-eme ka data CRM gị dị ọcha na-eme ka nnukwu ahịa na ọganiihu dịkwuo elu.
API InsideView - Jiri InsideView Targeting ọgụgụ isi ụzọ gị, site na ijikọta ya na ngwa gị.
InsideView Expert Services-eduzi gị
InsideView bụ onye ọ tụkwasịrị obi maka ndị ahịa B2B na-achọ enyemaka na atụmatụ ha na-aga ahịa ahịa data ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elelị mgbagwoju anya dị na data ha. InsideView Expert Services dị iche iche site na inye aka na njirimara ogo data dị ka nhicha, nkwado email, yana ịkpọtụrụ kọntaktị, na ọrụ ndị ọzọ na-agba izu dị ka Target Market Analytics, nke na-enyere ndị ahịa aka ịkọwa ahịa ha niile nwere ike ịchọta (TAM).
Ọrụ a na-enye njikwa ihe ngosi data nke na-enyere ndị ahịa aka ịgba ọsọ "ihe-ma ọ bụrụ" na ezigbo oge ma na-eme mkpebi na ahia di na akaụntụ Nhọrọ akaụntụ (ABM), nhazi ókèala, na mgbasawanye ahịa ebumnuche.
Ebumnuche Omume kachasị mma
Kedu ụzọ kachasị mma iji mezuo ebumnuche ịga-ahịa dịka ABM? Anyị amụtala na ndị na-ere ahịa B2B na-eso usoro usoro atọ iji hụ na ha na-atụnye ụtụ na mmụba ego atụ.
Mara n’ezie ihe ị chọrọ ime - ma nwee data iji ruo ha. Nwere ike ịnweta ndị otu egwuregwu gị họrọ akaụntụ gị (na nke a bụ mgbe ụlọ ọrụ na-amalite), mana usoro a ga-emecha bụrụ nke ahịa na-achịkwa. Azụziri ahịa iji mepụta nhọrọ ahọpụtara n'ahịa gafee ụlọ ọrụ, ọrụ mmadụ, na ọrụ. Kọwapụta profaịlụ onye ahịa gị dị mma (ICP) bụ ihe mbụ ị ga-eme iji wulite atụmatụ ebumnuche ahịa ahịa. ICP bụ njirisi ntozu ị na-eji iji chọpụta ma olile anya ọ kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị. Criteriakpụrụ ndị a na-agụnye data gbasara ihe ọmụma (dịka ụlọ ọrụ, nha, ọdịdị ala), isi okwu na ọrụ, yana ọbụlagodi ogo, dịka ma ụlọ ọrụ ahụ ọ ọhụụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ laggard.
Ozugbo ị matara ICP gị, ịnwere ike iji njirimara ndị ahụ chọpụta ahịa gị zuru ezu (TAM) ma chọpụta oke ahịa gị. TAM na-eme ka ị mara ọtụtụ ụlọ ọrụ dabara na ICP gị ma chọpụta etu nnukwu ohere ahịa si dị n'ihu gị. InsideView achọpụtala na ọtụtụ ndị ahịa anyị ejidela ihe na-erughị 10% nke TAM ha na nchekwa data ahịa ha. A na-akpọ oghere ahụ na-efu ka ebe ọcha. Ozugbo ịchọpụtara ebe ọcha gị, ị nwere ike ịmalite ibubata ihe ọhụụ ọhụrụ na imezi, ihicha, na ịgbakwunye data efu na lekwasịrị anya na nchekwa data gị.
Kọwapụta ICP gị na TAM dị oke nkenke ma hibe isi maka atumatu ịga ahịa na ebumnuche ABM. SiriusDecisions gbakwunyere ọhụrụ na nso nso a “Ebumnuche Ebumnuche” oyi akwa N'elu elu ochicho mmasi ha a ma ama, na-egbo mkpa a. Ọzọkwa, ha mere nyocha nke gosiri na ihe karịrị ọkara nke ụlọ ọrụ taa enweghị efu maka mmachi TAM ha.
Debe data ị lekwasịrị anya ugbu a. Akaụntụ B2B na kọntaktị ire ere na oke ọsọ ọsọ. Dabere n'ọtụtụ ọmụmụ ọ dị n'etiti 30-70% kwa afọ. Yabụ, ijigide ogo nchekwa data kwesịrị ịbụ ihe kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ niile. Nsogbu a ka njọ na ABM, nke na-etinye ego na idebe akụkọ gị dị egwu iji kwado eziokwu ahụ na akaụntụ gị nwere ike gbanwee, ahịa nwere ike ịgbanwe, ị nwere ike ikpughe ozi ọhụụ nke na - enyere gị aka ịkwanye ezigbo ndị ahịa, ọrụ, ma ọ bụ ihe omume na-egosi a mkpa. Ga-abanye n'ime oge ebe ndị mmadụ kwụsịrị ma ọ bụ kwaga ọrụ, ma ọ bụ ebe ụlọ ọrụ na-ahazigharị ma gbanwee ibu ọrụ. Idobe data gi ohuru bu uzo iji hu na ezubere iche na-ezighi ezi. Kwuo "uzo 1" gi niile nwere ego kariri $ 500. Ka ị na-amụtakwu, ị ga-ahụ na usoro ahịa dị mkpụmkpụ karịa maka ụlọ ọrụ n'okpuru $ 1 ijeri na ego ha nwetara. Inwere ike igha ebugharị ebumnuche 1 nke ihe ruru $ 500 nde ruo $ 1 billion in revenue, wee tụlee ndị nwere ego karịrị ijeri $ 1 dị ka ọkwa 2. Inwe data ntinye ego na nke ziri ezi na ebumnuche ọ bụla bụ naanị ụzọ ị ga - esi mezie mbọ gị ngwa ngwa ma lekwasị anya akụkọ kacha mma nwere ozi ahaziri iche.
Jiri ABM iji kwado ahịa na azụmaahịa maka ọganiihu. Ndi otu na ndi otu ahia na ndi ahia ruru 24% na-enweta ngwa ngwa na 27% ngwa ngwa karie otutu afo ato, dika SiriusDecisions kwuru. Anyị mụtara na a nyocha nke ihe karịrị 1,000 sales na mndị ndu arketing na ụlọ ọrụ na-eme ihe ngosi dị elu na-egosipụta ike n'akụkụ anọ dị mkpa maka ntọala: mmezi nkwukọrịta, mmụba pipeline, ịgbaso ịdị mma, na ịba ụba data iji mee ka atụmanya na-aga nke ọma. ka a ka mma kwekọọ. Dịka e kwuru n'elu na # 1, ịhọrọ ebumnuche ABM kwesịrị ịkwalite site n'ịre ahịa, mana nke ahụ apụtaghị na ahịa kwesịrị ịme naanị ya. Na mgbakwunye na isi ọrụ ha nke ire, itinye aka na atụmanya, ịnyagharịa usoro ọchịchị, na mmechi mmechi, ndị na-ere ahịa ahịa nwekwara nnukwu ahịa, ụlọ ọrụ, na ihe ọmụma ndị ọzọ a ga-etinye ka ahịa na-emepe ICP ma na-elekwasị anya na akaụntụ onye ọ bụla. mmalite mmalite nke ABM nwere ike ịmalite nke ọma site na ịrụ ọrụ na ịge ntị na ahụmịhe nke ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ma eleghị anya ahịa na-ezubere ọkwa VP, mana ahịa achọpụtala na, ọ bụrụ na ha na VP ekwurịta okwu, a na-agbada ha na ọkwa onye isi. Ma dịka ABM na-aga n'ihu, ahịa ga-eso ndị otu egwuregwu na-arụkọ ọrụ ọnụ na akaụntụ onye ọ bụla. Mgbe akuku abuo nwere oke na etolite atumatu ABM, ha gha aru oru na isi ihe nile n’eme ka ahia di n’iru.
Ka ị na-ele anya ịkwalite uto ego, a na-ejikwa ahịa zuru ezu (TAM) iji chọpụta ọnụọgụ ahịa ọhụrụ ịbanye, iji kwado ma ọ bụ gbasaa itinye ego na ahịa dị ugbu a, ma ọ bụ nyocha ohere ọhụụ ọhụụ ọhụụ. N'okwu ọ bụla, inwe echiche ziri ezi banyere TAM dị oke mkpa iji mee mkpebi azụmahịa kachasị mma. Ile anya n’ahịa gị na-enyere aka ịkọwa ókèala ahịa, na-ekenye akụrụngwa ahịa ahịa yana itinye mmemme, yana itinye mgbalị ahịa zuru oke maka oke ROI.
Ndị isi ahịa azụmaahịa chọrọ ịza ajụjụ maka uto ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ịnwe ọgbụgba siri ike n'ahịa ha lekwasịrị anya na itinye ego na-elekwasị anya na ọgụgụ isi iji mee ka mmezu ha na-aga ahịa Nọgide na-eso ndụmọdụ ndị a:
Kọwapụta ICP gị na TAM bụ ntọala ịmalite ihe ahia di na akaụntụ mmemme ma dị oke mkpa maka ịga nke ọma ya.
TAM abụghị atụmatụ otu oge. Ọ bụ usoro na - aga n’ihu wee na - agbanwe ka azụmahịa gị na - eto. Nyochaa ICP na akaụntụ gị ịchọrọ dịkarịa ala kwa afọ.
Jiri TAM ka ị nweta irere ahịa na ịre ahịa gburugburu akụkụ ahịa na ndị ahịa ị na-achụ. Easyzọ dị mfe iji mee ka ndị otu gị na-emekọ ihe bụ site n'iji anya nke uche gị hụ TAM iji rụọ ọrụ ọnụ na-eme ihe-ma ọ bụrụ na ọnọdụ ma mee mkpebi ngwa ngwa.
Debe data gị ugbu a ma ghara ijide nhicha data. Cheta na data B2B na akaụntụ elebara anya na-agbanwe ugboro ugboro ka ndị mmadụ na-agbanwe ọrụ, otu dị iche iche na-agbanwe usoro, yana ahịa niile na-agbanwe.
Infographic: Find, Target na soro na gị Total addressable Market na 4 Mfe Nzọụkwụ
Download ebook anyị: You ma ahia ahia gị niile? Nzọụkwụ atọ iji mee ka ụzọ ị ga-aga ahịa na-aga nke ọma
Download ebook anyị
Tags: abmahia dabere na ahịab2bnkwenyeichin'imen'ime ime apisime n'ime ụlọume ọhụrụ n'imen'ime ụlọ ahịalebara anya n'imepersonafulliche ina oyi akwaezubere iche nke ọgụgụ isilekwasịrị anyangụkọta addressable ahịa
Aug 10, 2017 na 12:09 PM
Daalụ maka post a ọtụtụ